5 Famous Theaters In Eoropa | Save A Train Travel Europe
Home > Travel Europe > 5 Famous Theaters In Eoropa
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 14/02/2020)
Theaters malaza any Eoropa dia voarary amin'ny lamba ny Eoropeana kolontsaina. Teatra malaza any Eoropa Mampanantena anareo fampisehoana miavaka. Ho handao anao nahatonga, nifindra sy ny variana! Ny toetry ny fanaovana zavakanto dia mihelina sy ny famoronana miroborobo mahavariana. Ireo tselatry ny famirapiratana velona ihany eo amin 'ny fahatsiarovany. Teatra malaza any Eoropa miteraka ny fahatsapana ny fanavahana sy ny fahita firy. Izany dia fotoana fohy amin'ny fotoana ifanakalozana, ary dia te-Miaina ao amin'ny fahazavan'ny ny hazavana.
Ireo no sasany ny Top Picks ny teatra malaza indrindra any Eoropa, fotsiny-tsy maintsy mahita ny kolontsaina tia:
Toa mitombina ihany fa hanomboka any Italia, ny manjakazaka vokany eo amin'ny teatra malaza any Eoropa. The Teatro Alla Scalla dia izao tontolo izao-malaza an-tranon'i Opera italiana.
Maro amin'ireo mpihira lehibe ny lasa, ny farany dia roan-jato taona, efa nahatanteraka eto. Maro opéra malaza no nanana ny famokarana voalohany eto toy ny Othello, Nabucco amin'ny Verdi sy Madame Lolo amin'ny Giacomo Puccini.
Ity teatra dia lehibe sy tsara tarehy. Izany dia mozea izay afaka peruse faritra manokana izay matetika tsy misokatra ho an'ny daholobe. Ny goavana vita ny efitrano malalaky amin'ny hazo sy ny rakotra fitondran mena Velvet. Izany dia narehitra iray Bohemian kristaly chandelier.
The Globe Theater dia fantatra amin'ny anarana hoe Shakespeare Globe. Mety afa-po ireo mpankafy ny The Bard dia tsy maintsy hitsidika io teatra malaza any Eoropa. William Shakespeare asa mampiseho fahatakarana lalina ny olombelona. Ny asany captivates mpijery. Ny fifehezana ny teny anglisy no nanao ny tsehatra sy tsy mety lany andro tononkalo tapa-halalinan-tsainy.
Raha toa ianao ka tia Shakespeare, izany dia tena ny toerana ny fitsidihana! Tsindranolahy Tompo Men nandoro azy teo amin'ny 1613. Ny fanorenana indray ankehitriny izay mijoro eo amin'ny toerany amin'izao fotoana izao dia lavitra ny toerana tany am-boalohany.
Tonga izany telo-tantara, misokatra-rivotra fanaovana fampisehoana mba hankafy tsehatra. Mandray in atrikasa. Sit-in tamin'ny lahateny sy Nikarakara vakiteny. Misy tsara-tsehatra nanatrika fandaharana taona rehetra manodidina, ary izany dia tsy maintsy ao amin'ny lisitry ny teatra malaza any Eoropa.
Ny Paradis Latina dia niara-belona cabaret toerana izay ny mpandimby tany am-boalohany Theater Latina. Ny teny latinina no naniraka Theater am-piandohana tsy nisy hafa noho Napoleon Bonaparte ao amin'ny 1800s.
Maro ny rafitra nandoro nandritra izany fotoana izany. Anisan'izany ity iray ity. Fanta-daza noho ny glitz sy ny flair, koa raha mitady theatrics, ho hitanao izany amin'ny bonafide Paris izay ahitana fitambaran cabaret Show. Izay mitohy amin'ireo fampisehoana miavaka cabaret, ianao koa dia afaka mahita miavaka acrobatic sy ny trapeze asa.
Ny Volkstheater any Vienne dia tsara tarehy fahitana mijery. Tsy nisokatra voalohany tao 1889. Izany no iray amin'ny lehibe indrindra amin'ny karazany manerana an'izao tontolo izao miteny alemà firenena sady toy ny tsy maintsy mahita.
Naorina ho toy ny mora kokoa mitovy amin'ny Burgtheater, dia ny toerana voafidy tamin 'ny fotoana ho an'ny fiaraha-monina, fa ny ambony manao kanto dia ho an'ny olona rehetra mankafy. Eo am-piandohan'ny be voninahitra izany teatra, ny fifantohana dia tao Aotrisiana mpanoratra. ankehitriny, dia afaka ho vavolombelona any amin'ny lisitra fizahany be dia be izay efa nahazo laza iraisam-pirenena.
Ny tsianjery Bar eo amin'ny ambony rihana ny teatra. Izy io dia manapa-kevitra kokoa ny toerana ofisialy. Ny eto fa afaka mihaino mozika Ambient, mankafy klioba ary koa ny zava-mitranga sy ny famakian-teny maoderina fampirantiana.
5. The National Theater, Prague
Tsy mahagaga fa ny National Theater ao Prague dia anaram-bosotra, The Golden Chapel. Ary mijoro pireharehana amin'ny rehetra ny Neo-Renaissance voninahitra. Dia hahatsapa toa anao no anisan'ny tena ambony rehefa mitsidika ity teatra malaza any Eoropa.
Ny National Theater dia manan-karena amin'ny tantara Fa tany am-boalohany nandoro trano ao 1881. Firenena iray manontolo niara-nivory ho fanohanana ny manao kanto. Izy ireo nandray anjara izany ho voaorina indray sy ny manana azy io indray mandeha tsara araka izay nisy.
ankehitriny, andeha hizaha ny mahavariana isan-karazany ny ballets, piesy, ary opéra izay aingam-panahy, ary faly, ary mazava ho azy, hahatratra ny mitaingina amin'ny Save A Train mba ahatongavana any!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Famous Theaters In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/famous-theatres-europe/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#teatra ParadisLatin performingarts TeatroAllaScala teatra TheGlobeTheatre Train Travel Volkstheater